आश्मा र सरोजको जोडी तोडियो, आश्माले सन्नी रोजिन् ! - Everest Dainik - News from Nepal
आश्मा र सरोजको जोडी तोडियो, आश्माले सन्नी रोजिन् !
काठमाडौं, कार्तिक २६ । कार्टुन क्रियुमा सरोज अधिकारी र आश्मा बिश्वकर्माको जोडीको खुब जमेको थियो । तर अब यो जोडीलाई देख्न नपाइने भएको छ । आश्माले सरोजको साथ छोडेपछि एकै ठाउँमा अब यो जोडीलाई देख्न नपाइने भएको हो । अब उनले सन्नी सिंहसँग सहकार्य गर्ने भएकी छन् ।
पछिल्लो सिरिज ‘ट्वान्टी फस्र्ट लभ’को सफलतासँगै मिडिया स्केपले सरोज र आश्माको जोडी तोडिदिएको हो । यो कम्पनीले अर्को सिरिज ‘यू एण्ड मी’ निर्माण गर्ने भएको छ । यहि सिरिजमा आश्मा र सन्नी जोडीका रुपमा प्रस्तुत हुने भएका हुन् ।
ट्याग्स: Aashma BK, Cartoon Crew, Saroj Adhikari